Abavelisi bePaneli yeSolar yeSeli | China Isiqingatha-seSeli yePhaneli yeSolar Factory
Iphaneli yam ye-SOLAR M3 yesiqingatha seSolv Pv 5bb 6bb 9bb 390w 395watt 400wp 405 Watt 410 w iPerc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.38%) izibonelelo ezivela kubume beeseli ezinesiqingatha (uphawu oluphantsi lokumelana). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
Iphaneli yam yeSolar M6 yesiqingatha seSeli yePv 5bb 6bb 9bb 430w 435watt 440wp 445 Watt 450 w 455 w iPerc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 6/9/12 Busbar Solar Cell 6/9/12 busbar cell cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.38%) izibonelelo ezivela kubume beeseli ezinesiqingatha (uphawu oluphantsi lokumelana). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
I-SOLAR M3 Yesiqingatha seeseli ezili-120 zeeSolar Pv Panel 5bb 6bb 9bb 325w 330watt 335wp 340 Watt 345 w iPerc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.45%) izibonelelo ezivela kubume beeseli ezinesiqingatha (uphawu oluphantsi lokumelana). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza kokuKhanya okuPhezulu iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli t ...